トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Resona vhiza kadhi wokurarama chikwereti | akadai chimbadzo basa kukarukureta, basa mashoko
The wokurarama chikwereti kuna Resona vhiza kadhi, pane vatatu minamato uye nehasha.
1 pamusoro nhunzi ziso riri "ribonucleic pamusoro nhunzi", iyi ndiyo nguva kuti kunotenga kuchitoro, ndiro basa apo unogona kusarudza wokurarama chikwereti chete kana iwe zvakanyatsonanga "iri wokurarama chikwereti". Bundu-Mari muripo kana mubhadharo mu Yakabudiswa nokushandisa mari, kubudikidza zvokusarudza achishandisa wokurarama zvikwereti, zvinokwanisika kuti kunotenga kuenderana mumhuri.
2 imwe ziso kubva zororo iri, ari "ribonucleic gare gare". Ichi bundu Nemutengo kana Yakabudiswa panguva kunotenga, kunyange kana kugarwa kuburikidza chaiyo iri bhonasi muripo ndiwo basa kuti zvingaonekwa achinja wokurarama zvikwereti kwapera. Kuwedzera nzira parunhare kana paIndaneti, unogona nyore kuchinja kuti wokurarama zvikwereti.
Zvisinei, kana iwe tsanangurai munhu "bhonasi 2 nguva muripo", etc. Kana waita kuchanzi kare chikamu, kuchinja kuti wokurarama chikwereti panzira kuti haagoni kuva. Uyezve, sezvo pane mukana usingagoni kuchinjwa uye vakaramba chete inokwanisa kuchinja yakakodzera musi, unofanira kushandisa mangwanani.
chero nguva ribonucleic Kuzivisa
3 rimwe ziso, ndiye "chero nguva ribonucleic Declaration". Izvi, kunyange kana iwe tsanangurai bundu Nemutengo kana Yakabudiswa pamusoro pakaunda, ndiro basa kuti nguva dzose anova muripo mu wokurarama chikwereti. basa iri riri pamusoro zvinogona kuisa kana akadzima chero nguva, ungada kuchinja nguva nenguva maererano, akadai mumhuri ezvinhu.
Uyewo, anogona kuwedzera chemhosva kana mubayiro uzere, ndiko kuchiitwa "chero nguva ribonucleic Declaration". Somuenzaniso, paunopa imwe mari, zvakadai bonuses, kubudikidza kuwedzera mutsividzo, mubayiro uzere, unogona kuderedza zvinonyatsorehwa mutsividzo mari.
Resona vhiza kadhi wokurarama chikwereti muripo nzira
Resona Visa makadhi, vari vakagadzirira mutsividzo plan, akadai "pfupi kosi", inova mufananidzo kuti rokushandisa yokusarudzira chemhosva urongwa You. Nokufamba kwenguva pfupi, mwedzi kubhadhara iri kusvika 10,000 Yen, zviri zvaisanganisira chimbadzo basa iri. Zvisinei, kushandiswa wokurarama mbiri chete mutsva, kuti kubhadhara chitsama uye nhamba vachibhadhara ose pamwedzi zvinosiyana, ngatiitei kungwarira.
basa mwero wokurarama chikwereti chimbadzo basa
Resona vhiza kadhi wokurarama chikwereti kuna Resona Visa kadhi iri "nouchapupu mwero 15,0 muzana gore negore." Zvichienzaniswa mukuru mutengi mari uye makadhi makambani, zvichaita zvinganzi kuti avhareji kusanganiswa tsika.
bhuku | mukuru mubereko kuti wokurarama mbiri pakati (komisheni), kufarira prices
chimbadzo kubhadhara kukarukureta kwave dzaona mu "mubereko mwero mari × chimbadzo". Somuenzaniso, kana iwe kugadzirisa kunotenga kuti 100,000 Yen iri wokurarama chikwereti kuna Resona Visa kadhi, vachave "100,000 Yen × 15% = 115,000 Yen". Mune mamwe manzwi, zvaizoda 15,000 Yen kuti mari iri gore rimwe iyi. Kana chemhosva nguva haisi gore asingasviki chete, mari achava isingadhuri pane 15,000 Yen. 000 Yen kubhadhara achaita anogona kutora. Kana chemhosva nguva haisi gore asingasviki chete, mari achava isingadhuri pane 15,000 Yen. 000 Yen kubhadhara achaita anogona kutora. Kana chemhosva nguva haisi gore asingasviki chete, mari achava isingadhuri pane 15,000 Yen.